Hogaamiyaha Aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale, ayaa cadeeyay in ciidamada Kenya aysan ka baxeyn dalka Somaliya inta ay jiraan Ururka Al Shabaab – STAR FM SOMALIA
Hogaamiyaha Aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale, ayaa cadeeyay in ciidamada Kenya aysan ka baxeyn dalka Somaliya inta ay jiraan Ururka Al Shabaab ee Somaliya ka dagaalama.
Ciidamada Kenya ee howlgalka Midowga Afrika Amisom ka tirsan ayuu sheegay Aadan Barre Ducaale inay Somaliya u joogaan danaha dalka Kenya, gaar ahaan ammaanka Qaranka Kenya iyo sidii shacabka Kenya ay nabad ugu seexan lahaayeen.
“Ciidanka Kenaya waxa ay joogaan Soomaliya sababtu waa inay ka shaqeynayaan danaheena,waxa ay halkaasi u tageen arimo xadidan oo ku xiran ammaankeena Qaranka iyo inay ilaaliyaan xuduudaheena iyo dadkeena.” Sidaasi waxaa yiri Aadan Barre Ducaale
Inta ay Shabaab ka dagaalamayaan gudaha dalka Somaliya ayuu sheegay Xildhibaan Aadan Barre Ducaale ciidanka Kenya inaysan ka bixi doonin gudaha dalka Somaliya, maadaama ammaanka Kenya ay gudaha Somaliya ka ilaaliyaan ciidamada Kenyan-ka.
Hadalkaan Ayuu Xildhibaan Aadan Barre Ducaale wuxuu ka jeediyey Munaasabad yabooh loogu sameynaayey Dugsi sare oo ku yaallo dalka Kenya.
Madaxweynaha Kenya ayaa horay u cadeeyay in ciidamada Kenya aysan ka baxeyn gudaha dalka Somaliya, maadaama ay Shabaab la dagaalamaan sidoo kalena ammaanka dalka Kenya ay ilaaliyaan.
Baarlamaanka Somaliya ayaa loo qaybiyay qaraar ka dhan ah darbiga Dowladda Kenya ay ka dhiseyso xuduuda iyo sidoo kale in ciidamada Kenya ay ka baxaan gudaha Somaliya, inkastoo dhaqangalka qaraarkaasi weli aysan ka hadlin Xildhibaanada.